नेपाल लगायत २० राष्ट्रमा तिब्ररुपमा कोरोना भाइरसको प्रकोप बढदै: २ सय १३ जनाको मुत्यू, हजारौ प्रभाबित (कुन कुन देशमा फैलियो ! सूचि सहित ) – HamroSamrachana
नेपाल लगायत २० राष्ट्रमा तिब्ररुपमा कोरोना भाइरसको प्रकोप बढदै: २ सय १३ जनाको मुत्यू, हजारौ प्रभाबित (कुन कुन देशमा फैलियो ! सूचि सहित )
हाम्रो संरचना आइतवार, कार्तिक ७, २०७८ 559 Views
१८ माघ, समाचार एजेन्सीहरु/ चीनबाट दुई हप्ता अघि फैलिएको कोरोना भाइरसलाई लिएर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) ले विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेपछी नेपालले चीनको वुहानमा रहेका नेपाली बिद्यार्थीहरुलार्य नेपाल फर्काउन पत्राचार गरेको छ ।
चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वका विभिन्न देशमा फैलिएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको छ । बिहीबार जेनेभामा बसेको डब्ल्यूएचओको आपत्‌कालीन बैठकले प्राणघातक कोरोना भाइरसको प्रकोपलाई ‘विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटकाल’ का रुपमा घोषणा गरेको हो ।
अहिले यसको संक्रमण विश्वका २० देशमा फैलिसकेको छ। कोरोना तीव्र गतिमा फैलन थालेपछि डब्लयूएचओको आपतकालीन बैठकले विश्व स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको हो। विश्व आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्नुको कारण गरिब राष्ट्रहरुमा कोरोना भाइरसको प्रकोप फैलिन रोक्नु मुल केन्द्रित रहेको डब्ल्यूएचओका प्रमुख टेड्रोस अडनोम गेब्रियसले बताउनु भएको छ।
डब्ल्यूएचओले यसअघि सन् २००९ मा स्वाइनफ्लु, सन् २०१४ मा पोलियो, सन् २०१६ मा जिका, तथा सन् २०१४ र सन् २०१९ मा इबोला सङ्क्रमण गरी पाँच पटक विश्व स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको थियो।
कोरोना भाइरसको कारण चीनमा अहिलेसम्म २ सय १३ जनाको ज्यान गइसकेको छ। भाइरसले चीन बाहिर १९ देशका ९८ जनामा सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको डब्लुएचओले जनाएको छ। कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली भएका देशमा फैलिएमा यो भाइरसले जटिल अवस्था ल्याउनेतर्फ पनि डब्ल्यूएचओले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
बांके बासी हात्तीपाइले रोगको उच्च जोखिममाः जनताले औषधी नखाईदिदा समस्या कायमै